Home » Travel Associations News » Minisitry ny fizahantany Maorisy andro be atao ao amin'ny WTM
Ny talata lasa teo ny minisitry ny fizahantany any Maorisy, ny filoha, ary ny talen'ny dia nahavita andro iray hafa nahombiazana tao amin'ny World Travel Market, natao tany London. Hanombohana dia nanao fivoriana niaraka tamin'ny ny Lehiben'ny filoha sy ny Tale mitsoraka magazine hiresahana ireo hetsika ho avy eto amin'ny nosy ary indrindra ireo 50 andrasana fatratrath tsingerintaona nankalazana ny fankalazana ny fahaleovan-tena tamin'ny taona 2018.
Taorian'ny fihaonana tamin'ny haino aman-jery, ny Minisitra dia nanatevin-daharana ny Filoham-pirenena sy ny Tale hanatrika ny fivorian'ny World Travel Market, izay nijery ny 'Maximizing Revenue in the Luxury Travel Space'. Notsidihan'ny Mpanorina ny olom-pirenena nahazo aingam-panahy, Anthony Berklich, ny fizarana dia nikaroka izay notadiavin'ny mpandeha mba tsy ho hadino ny zavatra niainany.
Ny tolakandro dia nanatrika ny 'fihaonamben'ny minisitra UNWTO & WTM 2017' ny Minisitra. Nifantoka tamin'ny fampandrosoana maharitra sy ny fitantanana fizahantany ny fihaonana an-tampony, ny fanambin'ny fitohanana, ny fanamafisana ny fifandraisan'ny fizahan-tany sy ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana, ny fomba hamahana ny fiheveran'ny besinimaro ny fizahan-tany, ary ny fampiasana ny fizahan-tany ho fitaovana mahomby hahatratrarana ireo tanjona kendrena maharitra. Nandritra io fotoana io dia nanohy nihaona tamin'ny mpivarotra sy haino aman-jery mpizahatany mpizahatany mpizahatany mpizahatany ny Lehiben'ny filoha sy ny talen'ny Direction, anisan'izany ny Secret Escapes, Diver Magazine, ary ny Lonely Planet Traveler mba hiresaka momba ny fotoana mety hampiroboroboana ny toerana haleha.
Tany amin'ny faran'ny tolakandro dia nanatrika ny fivorian'ny tsena eran-tany momba ny 'Globalisation de la voyage: manao ahoana ny teknolojia manoloana ireo sakana ary misy fiatraikany tsara eo amin'ny tontolontsika' ny minisitra sy ny filoha. Hari Nair, filoha lefitra zokiny manerantany ao amin'ny Expedia Media Solutions, dia nizara ny fikarohana, ny fomba fijeriny ary ny ohatra nomeny momba ny teknolojia izay mandroso ny fanatontoloana ny dia.
Ny hariva dia nanatrika fandraisana olona nisotro zava-pisotro natolotry ny Attitude Resorts niaraka tamin'ny mpiara-miombon'antoka lehibe hafa ny MTPA.
Raha mila fanazavana fanampiny dia tsidiho azafady www.tourism-mauritius.mu